ကြက်ဥတစ်နေ့တစ်လုံးစားရင် ရရှိလာနိုင်မည့် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ – Shangyimm
ကြက်ဥတစ်နေ့တစ်လုံးစားရင် ရရှိလာနိုင်မည့် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
Posted on June 30, 2020 June 30, 2020 by Shangyi
ၾကက္ဥတစ္ေန႔တစ္လုံးစားရင္ ရရွိလာႏိုင္မည့္ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ငယ္ငယ္က ေဒါက္တာစု တစ္ေယာက္ေနမေကာင္းျဖစ္ခ်ိန္ဆို အေမက ၾကက္ဥေကြၽးပါတယ္။
ေဒါက္တာစုတစ္ေယာက္ ေဆးေက်ာင္းေရာက္လို႔ ဆရာႀကီးေတြ ခြဲစိတ္ေဆာင္မွာ လူနာၾကည့္ၿပီဆိုရင္ အနာက်က္တာေႏွးတဲ့ လူနာေတြဆိုရင္ ” ၾကက္ဥ တစ္ေန႔တစ္လုံးစားေလ အနာျမန္ျမန္က်က္ေအာင္” ဆိုၿပီးေျပာျပန္ေရာ။
ေဒါက္တာစုတစ္ေယာက္အၿမဲ စဥ္းစားျဖစ္တယ္။ ဒီေလာက္ေဈးသက္သာၿပီး လြယ္လြယ္ဝယ္လို႔ရတဲ့ ၾကက္ဥက အာ့သေလာက္ေတာင္ေကာင္းသလားေပါ့။ အမ်ားအားျဖင့္ ေဈးႀကီးမွ ေကာင္းၾကကတာကိုး။
အခုလည္း ေဒါက္တာစုတစ္ေယာက္ ၾကက္ဥအေၾကာင္း ကိုယ့္လို သိခ်င္ၾကမယ္ထင္လို႔ ေဒါက္တာဇီဝက မွ ေဆာင္းပါးအျဖစ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္အေမေတြက ေနမေကာင္းျဖစ္ရင္ ၾကက္ဥေကြၽးတာေနမယ္လို႔ေတာင္ေတြးမိပါတယ္။ ေဟာ ၾကည့္ေလ ၾကက္ဥေလးတစ္လုံးမွာဗီတာမင္အားေဆးလိုပဲ ဗီတာမင္ A,D,E,K, Zinc ေတြ အကုန္ပါဝင္တယ္ဆိုေတာ့ အေတာ္အားရွိေစတဲ့အစားအစာလို႔ေျပာရမွာပါ။
၂. ၾကက္ဥမွာ အေရအေသြးျပည့္ဝတဲ့ အသား Protein ဓာတ္ႂကြယ္ဝစြာပါတယ္။
Protein ဓာတ္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အေျခခံအုတ္ျမစ္ပါ။ Protein ဓာတ္ျပည့္ဝမွ ႂကြက္သားေတြႀကီးထြားလာမယ္။ အဆီေနရာမွာ အသားေတြတက္လာလို႔ ဝိတ္က်ေစမယ္။ အ႐ိုးက်န္းမာေရးေကာင္းေစမယ္ စတဲ့ အက်ိဳးေတြရရွိႏိုင္မွာပါ။
ဒါကေတာ့ ၾကက္ဥ အႏွစ္မွာ အဆီ Cholesterol မ်ားတယ္ဆိုၿပီးထင္ေနသူေတြအတြက္မမွန္ဘူးဆိုတာ ေျပာခ်င္လို႔ပါ။ စားလိုက္တဲ့ အဆီဓာတ္တိုင္းကေသြးထဲကို တန္းၿပီးေရာက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အသည္းက ေန႔စဥ္ သူ႔လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အဆီဓာတ္ေတြေသြးထဲကို ထုတ္ေနတာပါပဲ။ အဆီေတြစားလိုက္ေတာ့ အသည္းကထုတ္တာနည္းၿပီး မေကာင္းတဲ့အဆီေတြက်ႏိုင္တယ္လို႔ေတာင္ယူဆလို႔ရပါတယ္။ ၾကက္ဥ ပုံမွန္စားသူ ၇၀%ဟာ ေသြးတြင္း Cholesterol ဓာတ္မတက္တာကို သက္ေသအျဖစ္ေတြ႕ရွိထားတာမို႔ စိတ္ခ်လက္ခ်စားႏိုင္ပါတယ္။
ဗီတာမင္ B မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ Choline ဟာ အစားအစာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မပါတတ္ပါဘူး။ အာ႐ုံေၾကာေလးေတြ လုပ္ေဆာင္ေရးမွာ အေရးပါတဲ့ Choline ကို ၾကက္ဥမွာ အမ်ားအျပားပါတာ အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႕ရပါတယ္။
ၾကက္ဥထဲမွာ Lutein ကဲ့သို႔ ဓာတ္တိုးဆန႔္က်င္ပစၥည္းေတြပါဝင္ၿပီး ဒီပစၥည္းေတြက အသက္ႀကီးလို႔ ေရတိမ္ျဖစ္တာ၊ မ်က္စိမွန္ဘီလူးပ်က္စီးတာေတြကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္တဲ့။ ဒီဓာတ္က ၾကက္ဥရဲ႕ အႏွစ္မွာ အဓိက ပါဝင္ပါတယ္ေနာ္။
ကဲ ဘာၾကည့္ေနေသးလဲ ၾကက္ဥ သြားဝယ္စားေတာ့ေလ။
ငယ်ငယ်က ဒေါက်တာစု တစ်ယောက်နေမကောင်းဖြစ်ချိန်ဆို အမေက ကြက်ဥကျွေးပါတယ်။
ဒေါက်တာစုတစ်ယောက် ဆေးကျောင်းရောက်လို့ ဆရာကြီးတွေ ခွဲစိတ်ဆောင်မှာ လူနာကြည့်ပြီဆိုရင် အနာကျက်တာနှေးတဲ့ လူနာတွေဆိုရင် ” ကြက်ဥ တစ်နေ့တစ်လုံးစားလေ အနာမြန်မြန်ကျက်အောင်” ဆိုပြီးပြောပြန်ရော။
ဒေါက်တာစုတစ်ယောက်အမြဲ စဉ်းစားဖြစ်တယ်။ ဒီလောက်ဈေးသက်သာပြီး လွယ်လွယ်ဝယ်လို့ရတဲ့ ကြက်ဥက အာ့သလောက်တောင်ကောင်းသလားပေါ့။ အများအားဖြင့် ဈေးကြီးမှ ကောင်းကြကတာကိုး။
အခုလည်း ဒေါက်တာစုတစ်ယောက် ကြက်ဥအကြောင်း ကိုယ့်လို သိချင်ကြမယ်ထင်လို့ ဒေါက်တာဇီဝက မှ ဆောင်းပါးအဖြစ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. ကြက်ဥမှာ ဗီတာမင် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တယ်။
ဒါကြောင့်အမေတွေက နေမကောင်းဖြစ်ရင် ကြက်ဥကျွေးတာနေမယ်လို့တောင်တွေးမိပါတယ်။ ဟော ကြည့်လေ ကြက်ဥလေးတစ်လုံးမှာဗီတာမင်အားဆေးလိုပဲ ဗီတာမင် A,D,E,K, Zinc တွေ အကုန်ပါဝင်တယ်ဆိုတော့ အတော်အားရှိစေတဲ့အစားအစာလို့ပြောရမှာပါ။
၂. ကြက်ဥမှာ အရေအသွေးပြည့်ဝတဲ့ အသား Protein ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါတယ်။
Protein ဓာတ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ပါ။ Protein ဓာတ်ပြည့်ဝမှ ကြွက်သားတွေကြီးထွားလာမယ်။ အဆီနေရာမှာ အသားတွေတက်လာလို့ ဝိတ်ကျစေမယ်။ အရိုးကျန်းမာရေးကောင်းစေမယ် စတဲ့ အကျိုးတွေရရှိနိုင်မှာပါ။
၃. ကြက်ဥဟာ သွေးတွင်းအဆီ ဓာတ်မတက်စေပါဘူး။
ဒါကတော့ ကြက်ဥ အနှစ်မှာ အဆီ Cholesterol များတယ်ဆိုပြီးထင်နေသူတွေအတွက်မမှန်ဘူးဆိုတာ ပြောချင်လို့ပါ။ စားလိုက်တဲ့ အဆီဓာတ်တိုင်းကသွေးထဲကို တန်းပြီးရောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အသည်းက နေ့စဉ် သူ့လုပ်ငန်းဆောင်တာ အဆီဓာတ်တွေသွေးထဲကို ထုတ်နေတာပါပဲ။ အဆီတွေစားလိုက်တော့ အသည်းကထုတ်တာနည်းပြီး မကောင်းတဲ့အဆီတွေကျနိုင်တယ်လို့တောင်ယူဆလို့ရပါတယ်။ ကြက်ဥ ပုံမှန်စားသူ ၇၀%ဟာ သွေးတွင်း Cholesterol ဓာတ်မတက်တာကို သက်သေအဖြစ်တွေ့ရှိထားတာမို့ စိတ်ချလက်ချစားနိုင်ပါတယ်။
၄. ကြက်ဥမှာ Choline ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါတယ်။
ဗီတာမင် B မျိုးနွယ်ဝင် Choline ဟာ အစားအစာအတော်များများမှာ မပါတတ်ပါဘူး။ အာရုံကြောလေးတွေ လုပ်ဆောင်ရေးမှာ အရေးပါတဲ့ Choline ကို ကြက်ဥမှာ အများအပြားပါတာ အံ့သြဖွယ်တွေ့ရပါတယ်။
ကြက်ဥထဲမှာ Lutein ကဲ့သို့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပြီး ဒီပစ္စည်းတွေက အသက်ကြီးလို့ ရေတိမ်ဖြစ်တာ၊ မျက်စိမှန်ဘီလူးပျက်စီးတာတွေကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒီဓာတ်က ကြက်ဥရဲ့ အနှစ်မှာ အဓိက ပါဝင်ပါတယ်နော်။
၆. ကြက်ဥ ဟာ ဝိတ်ကျစေပါတယ်။
ကြက်ဥနဲ့ ဝိတ်ချနည်းဆိုပြီးတောင် ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ ကြက်ဥက ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေတယ်ဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။ ကြက်ဥဟာ ကယ်လိုရီအလွန်နည်းပြီး အသားဓာတ်များတာမို့ ဝိတ်ချတဲ့နေရာ မှာ အားပြတ်တာမျိုးမဖြစ်စေဘဲ စိတ်ချလက်ချစားနိုင်ပါတယ်။
ကြက်ဥကြီးပဲ စားတာမျိုးကိုတော့ သိပ်အားမပေးပါဘူးနော်။
ကဲ ဘာကြည့်နေသေးလဲ ကြက်ဥ သွားဝယ်စားတော့လေ။